Mareykanka oo xayiraadda ka qaaday Qaxootiga | Faafan News
Mareykanka oo xayiraadda ka qaaday Qaxootiga
Saraakiisha Dowladda Mareykanka ayaa sheegay in la qaaday mamnuucistii dadka qaxootiga ah ee ka socda 11 dal oo halistooda badan tahay in ay galaan Mareykanka.
Wasaaradda Amniga Gudaha dalka Mareykanka ayaa sheegtay in qiimeyn lagu sameyn doono heerka qatarta qofka qaxootiga ah ee uu leeyahay, kahor inta aanan la aqbalin, iyada oo sidoo kale sheegtay qaxootiga in ay wajihi doonaan baaritaano dheeraad ah.
11-ka dal ee wareegtada Madaxweyne Donald Trump ka joojisay in dadkooda ay galaan Mareykanka ayaa kala ah Masar, Iran, Iraq, Libya, Mali, North Korea, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria iyo Yemen, kuwaas oo hadda la oggolaaday in ay geli karaan Mareykanka.
Donald Trump oo xayiraadii la saaray dalalkan abaabulkeeda lahaa ayaa horey u yiri “Madaxweyne ahaan, waa inaan u dhaq dhaqaaqaa ilaalinta amniga iyo danaha Mareykanka iyo dadkiisa, ilaalinta amniga waa mudnaanta koowaad, si taasi loo gaaro waa in uu yimaadaa isbedel.” Ayuu yiri Donald Trump oo hadal ka soo saaray.
Golaha Xiriirka Muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo (CAIR), Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka, iyo ururada bulshada ayaa si aad ah u soo dhaweeyay go’aankan, waxayna sheegeen Trump inuu ka laabtay qeyb ka mid ah ajandayaashiisa foosha xun.
Dadka sida aadka ah u falanqeeya ayaa arrintan ku tilmaamay in Aqalka Cad uu ogaanayay amarka Trump inuu dhaqan geli karo oo loo hogaansami karo iyo inuu Trump ka lahaa ujeedo ah inuu isbedel la yimaado.,